छोरीले घण्टौंसम्म बाथरुममा बिताएपछि बाबुले दिए 'सेक्स टोय' उपहार
काठमाडौं । बत्तीसपुतली घर भई बेलायत बस्दै आएका हरि सापकोटा (नाम परिवर्तन) ले केही महिनाअघि छोरीलाई एउटा म्यासेज पठाए । त्यो म्यासेज बाबु छोरीलाई पठाउने खालको भन्दा निकै माथिको थियो । उनले पठाएको म्यासेज या श्रीमतीलाई पठाउने या त सेक्स पार्टनरलाई पठाउने खालको थियो ।दिल्लीस्थित जेएनयू युनिर्सिटीबाट मास्टर डिग्री गरेकी छोरी आयुशा (नाम परिवर्तन) त्यो म्यासेज देखेर तीनछक परिन् । छक्क मात्र परिनन्, उनको हातखुट्टा नै काँप्न थाले । म्यासेज हेरेर विश्वास लागेन । बाबुलाई म्यासेजमा किन यस्तो म्यासेज पठाउनुभयो भन्दा त्यसपछि अर्को अश्लील म्यासेज आयो । हरिले ३१ वर्षीया ‘झट्केली छोरी’ आयुशालाई अश्लील म्यासेज मात्र पठाउन थालेनन्, उनलाई यौन सम्बन्धका लागि उक्साउन समेत थाले । यो क्रम लामो समयसम्म चलिरह्यो ।त्यतिले पनि नपुगेपछि हरिले आयुशालाई उपहारमा ‘सेक्स टोय’ दिए । पटक पटक यौन हिंसा गर्ने, उपहारमा समेत सेक्स टोय दिनेजस्ता कार्य बाबुबाटै हुन थालेपछि आयुशा विक्षिप्त बनिन् । बाबुबाट यौन हिंसाको शिकार भएपछि आयुशा प्रहरीको शरणमा पुगिन् । प्रहरीले बाबुविरुद्ध यौन हिंसाको उजुरी दिइन् ।उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले उनको कुराको विश्वास नै गरेन । जब आयुशाले बाबुबाट आएका म्यासेज देखाइन् तब मात्र प्रहरी उजुरी लिन तयार भयो । र, यतिबेला हरि आफ्नै छोरीमाथि यौन हिंसा गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाले यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराधमा मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।नेपाल आउनेजाने गरेका हरि पछिल्लो समय भदौ पहिलो साता नेपाल आएका थिए । आयुशाले देखाएको म्यासेजका आधारमा पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक भने उनले काठमाडौं आउँदा छोरी आयुशाको लागि ‘सेक्स टोय’ नै उपहार ल्याएका थिए । बाबुले उपहारमा समेत ‘सेक्स टोय’ दिएपछि आयुशा सहन नसकेर प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेकी हुन् ।तर हरिले भने प्रहरीसँगको बयानमा आयुशा घण्टौंसम्म बाथरुममा बिताउने गरेको थाहा पाएपछि इच्छा पूरा गर्न ‘सेक्स टोय’ उपहार दिएको बताएका थिए । ‘छोरी घण्टौंसम्म बाथरुममा बिताउने गर्थिन् । उनको इच्छा बुझेर मैले उपहारमा ‘सेक्स टोय’ दिएको हुँ ।’ प्रहरीसँगको बयानमा हरिले भने ।हरिको पहिली श्रीमती उनलाई छोडेर अर्कैसँग बिहे गरेर दार्जिलिङ बस्ने गरेकी छन् । जेठी श्रीमतीबाट जन्मिएको छोरासमेत उनीसँगै गएपछि हरिको सन्तानका रूपमा छोरी आयुशा मात्र छिन् ।उनलाई पनि घरबाट निकालेर यौन अपराधको सहारा लिएको आफन्तको आरोप छ । आयुशा दोस्री श्रीमतीकी छोरी हुन् । हरिले दोस्रो बिहे गर्दा श्रीमतीसँगै आयुशालाई भित्र्याएका थिए । हरिले आयुशालाई छोरी स्वीकार गरेर श्रीमतीसँगै ल्याएका थिए ।शिक्षित बाबुबाटै यस्तो खालको अपराध भएपछि उनी प्रहरीको शरणमा पुगेकी हुन् । विराटनगर पुर्ख्याैली घर भएका हरिमा मानसिक समस्या हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।यो पनि https://www.youtube.com/watch?v=y8obIMAbuW8 https://www.youtube.com/watch?v=-ci9jzj_COI https://www.youtube.com/watch?v=5InB65agBmI https://www.youtube.com/watch?v=xv7-t5zyawM https://www.youtube.com/watch?v=DrovjhViH0I
१ आश्विन २०७६, बुधबार १९:४३
काठमाडौं । बत्तीसपुतली घर भई बेलायत बस्दै आएका हरि सापकोटा (नाम परिवर्तन) ले केही महिनाअघि छोरीलाई एउटा म्यासेज पठाए । त्यो म्यासेज बाबु छोरीलाई पठाउने खालको भन्दा निकै माथिको थियो । उनले पठाएको म्यासेज या श्रीमतीलाई पठाउने या त सेक्स पार्टनरलाई पठाउने खालको थियो ।
दिल्लीस्थित जेएनयू युनिर्सिटीबाट मास्टर डिग्री गरेकी छोरी आयुशा (नाम परिवर्तन) त्यो म्यासेज देखेर तीनछक परिन् । छक्क मात्र परिनन्, उनको हातखुट्टा नै काँप्न थाले । म्यासेज हेरेर विश्वास लागेन । बाबुलाई म्यासेजमा किन यस्तो म्यासेज पठाउनुभयो भन्दा त्यसपछि अर्को अश्लील म्यासेज आयो । हरिले ३१ वर्षीया ‘झट्केली छोरी’ आयुशालाई अश्लील म्यासेज मात्र पठाउन थालेनन्, उनलाई यौन सम्बन्धका लागि उक्साउन समेत थाले । यो क्रम लामो समयसम्म चलिरह्यो ।
त्यतिले पनि नपुगेपछि हरिले आयुशालाई उपहारमा ‘सेक्स टोय’ दिए । पटक पटक यौन हिंसा गर्ने, उपहारमा समेत सेक्स टोय दिनेजस्ता कार्य बाबुबाटै हुन थालेपछि आयुशा विक्षिप्त बनिन् । बाबुबाट यौन हिंसाको शिकार भएपछि आयुशा प्रहरीको शरणमा पुगिन् । प्रहरीले बाबुविरुद्ध यौन हिंसाको उजुरी दिइन् ।
उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले उनको कुराको विश्वास नै गरेन । जब आयुशाले बाबुबाट आएका म्यासेज देखाइन् तब मात्र प्रहरी उजुरी लिन तयार भयो । र, यतिबेला हरि आफ्नै छोरीमाथि यौन हिंसा गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाले यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराधमा मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।
नेपाल आउनेजाने गरेका हरि पछिल्लो समय भदौ पहिलो साता नेपाल आएका थिए । आयुशाले देखाएको म्यासेजका आधारमा पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक भने उनले काठमाडौं आउँदा छोरी आयुशाको लागि ‘सेक्स टोय’ नै उपहार ल्याएका थिए । बाबुले उपहारमा समेत ‘सेक्स टोय’ दिएपछि आयुशा सहन नसकेर प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेकी हुन् ।
तर हरिले भने प्रहरीसँगको बयानमा आयुशा घण्टौंसम्म बाथरुममा बिताउने गरेको थाहा पाएपछि इच्छा पूरा गर्न ‘सेक्स टोय’ उपहार दिएको बताएका थिए । ‘छोरी घण्टौंसम्म बाथरुममा बिताउने गर्थिन् । उनको इच्छा बुझेर मैले उपहारमा ‘सेक्स टोय’ दिएको हुँ ।’ प्रहरीसँगको बयानमा हरिले भने ।
हरिको पहिली श्रीमती उनलाई छोडेर अर्कैसँग बिहे गरेर दार्जिलिङ बस्ने गरेकी छन् । जेठी श्रीमतीबाट जन्मिएको छोरासमेत उनीसँगै गएपछि हरिको सन्तानका रूपमा छोरी आयुशा मात्र छिन् ।
उनलाई पनि घरबाट निकालेर यौन अपराधको सहारा लिएको आफन्तको आरोप छ । आयुशा दोस्री श्रीमतीकी छोरी हुन् । हरिले दोस्रो बिहे गर्दा श्रीमतीसँगै आयुशालाई भित्र्याएका थिए । हरिले आयुशालाई छोरी स्वीकार गरेर श्रीमतीसँगै ल्याएका थिए ।
शिक्षित बाबुबाटै यस्तो खालको अपराध भएपछि उनी प्रहरीको शरणमा पुगेकी हुन् । विराटनगर पुर्ख्याैली घर भएका हरिमा मानसिक समस्या हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
nepal police, छोरीमाथि यौन हिंसा, यौन अपराध, यौन हिंसा
Prevगृहमन्त्रीका भाइ नरेश १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
मण्डनदेउपुरकी दुवै मृगौलापीडित हरिमायाको सहयोगको लागि अनुरोधNext
के तपाई प्रहरीमा भर्ती भएर देशको सेवा गर्न चाहनु हुन्छ ? खुल्यो अवसरको ढोका
किन फस्छन् प्रहरी अफिसरहरू, आर्थिक चलखेल कि खुट्टा तानातान ?
प्रहरी बनेर देशको सेवा गर्न चाहनु हुन्छ ? ५ हजार २ सय जनाका लागि खुल्यो विज्ञापन
प्रहरी आचारसंहिता: फेसबुकमा लेख्दा सतर्क, विपरित लिङ्गीप्रति सम्मान